SingForYou.net - Nay Yar - 2
By : turikimuriki on Feb 23, 2010
Score: 155 Rating: 5.00 Comments: 30
Nay Yar - 2's Description
SFY မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ံအားပေးကြပါအုံးနော် ကျေးဇူးတင်လျှက်:))))))
mandalaythar on Mar 13, 2010 0
Nice One.. Fighting..... ^^ ကောင်း .. အရမ်းကောင်း... ကောင်းမှကောင်း... အလွန်တရာကောင်း.... သီချင်းရော ဆိုထားတဲ့ အသံရော တကယ်ကောင်းလို့ ထောက်ခံတာပါ.. လိုအပ်ရင် လက်မှတ်ပါထိုးပေးလို့ရပါတယ် ထောက်ခံစာမှာ... :P ( အသံကောင်းကြောင်းထောက်ခံစာကိုပြောတာနော်)
saikyaw on Feb 26, 2010 0
ညီမလေး..ဆိုအားကောင်း သလို...ကွန်မင့် ပေးအား ကောင်း လဲတယ်..တခါတလေ ညီမလေး ဆိုနိုင်သလောက် လိုက် နား မထောင် အားမပေးနိူင်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်..အလုပ်ပြီးရင်တော့ ပြန်ပြန် နားထောင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီလား
emerald on Feb 24, 2010 0
ဆိုသွားတာ ကောင်းလိုက်တာ . . . နားထောင်းအားပေးသွားပါတယ် . . .sis turi ***************************
MH on Feb 24, 2010 0
.........................................................................................................................................................................................................ဘာရေးရမှန်း မသိတော့ဘူး ... ဆိုထားတာ ကောင်းလွန်းလို့ခဏလောက် ရှော့ဖြစ်သွားတာ.... (တိန် တိန် တိန် တိန် တိန် ... တူရကီမူရကီ ...ခေါင်မိုး နဲ့ ခေါင်းနဲ့တိုက်မိတဲ့ အသံ ... ) အလကား ပြောဒါ လွှတ်ကောင်း အသံကောင်း အဆိုကောင်း နားထောင်လို့အလွန်ကောင်း... ၅စတားစ် .... :P:):D >>>>>> ဘယ်ရမလဲ ပြန်ကူးပြီ နာကွ ။ သူရကီရေ ရေလည်ကောင်းဟ ဆိုထားတာ ။
ကျနော်လဲ ဒီသီချင်းလေးအရမ်းကြိုက်တာ.. ညီမလေးဆိုသွားတာလဲအရမ်းကောင်းးလွတ်ကောင်းးး*******
u4gyi on Feb 24, 2010 0
Sis thant yay.. nay yar ta kar mhar ta nay yar sar oo htar loz ya wu.. naw.. Te del naw...:D :D :D..*****ar pay nay ber del..
susannyunn on Feb 24, 2010 0
nay yar ta nay yar sar oo htar teatwet kyay zuuamar g tin par te turikimuriki lay yay....aheeeeeeee:))))))))))))))))))))))))))))bravoooooo...:clap ;clap :clap.>>>>
So nice to listen& really love it sis layyy turi yayy*****************:)
mite tal byar.. so lite tine kg nay tar bea'...arr pay twar par tal byar...male song pay mea'..so htar tar ayan listen loz kg par tal..***************for sis
nero_810 on Feb 23, 2010 0
nice ...5*4u
aungtun1 on Feb 23, 2010 0
**********.....Like it,,,,, so nice singing of you,sister,,,,,,,********************
kthetkawmu on Feb 23, 2010 0
wow.... ayann ko kg nay par lar sis yay...so thar tar lay..ayann kyiuk tal********
စောနက တစ်ပုဒ်လုံးကိုနားထောင်နေတာ ပြီးတဲ့အထိ ဗုတ်မယ်ဆိုမှလိုင်းကျသွားလို့ FAV လိုက်ပီနော် အဟီး အရမ်းကိုကောင်းလို့ ဆိုသွားတာ ခြူးအားပေးသွားပါတယ်နော်
ahphyuyaung on Feb 23, 2010 0
sis yae... male song lay ko female key lay nae thi so thwar tar perfect par pae... great job sis!!! all stars for u... ********************************** :))
perfect ... love it sis ... ***** :)))))
ရှိသေးရင် နှစ်နေရာစာ ဦးထားပေးနော် sis ... :))) ***** for your great singing
sis yae ..arr pay twar par tal ...good ta lar ma may na` ...yae lae goodddddd
oh!.....kg nay pyan pye takhar( ko badin song).........hee,akyiuk chin tu nay pyan pye.......so ma lo try nay tar...........sis lay yay........ayann kg.....********
always nice.......great job..:)*********
khanttayza on Feb 23, 2010 0
good ma good pae sis yay !!! Nice one !! arr pay thawr par tae byar !! All star gyi htar kae pi naw ***********
:OOO love it..love it. kyite tal..ti kal..ti kal:D*****
Rosies on Feb 23, 2010 0
melody_queen on Feb 23, 2010 0
ama .. ayann listen lo kg tal.. :) .. arr pay twar tal naw.. 5* for you ,.... :)
plan on Feb 23, 2010 0
ayan kg tar bae ma ma. ayan mike tal.ma ma ka dar myo lae ya tal naw ayan kg par tal 5*******hay...................
mite tal... :) so htar tar taw taw lay ko listen loh kg par tal... arr pay nar sin twar par tal turikimuriki yay.... **********4u !.....>>>>>>>>> Minkha~!
chyu on Feb 23, 2010 0
kh tal sis... .. kyo sar htar.. ta kal kg tal....
.........................................................................................................................................................................................................ဘာရေးရမှန်း မသိတော့ဘူး ... ဆိုထားတာ ကောင်းလွန်းလို့ခဏလောက် ရှော့ဖြစ်သွားတာ.... (တိန် တိန် တိန် တိန် တိန် ... တူရကီမူရကီ ...ခေါင်မိုး နဲ့ ခေါင်းနဲ့တိုက်မိတဲ့ အသံ ... ) အလကား ပြောဒါ လွှတ်ကောင်း အသံကောင်း အဆိုကောင်း နားထောင်လို့အလွန်ကောင်း... ၅စတားစ် .... :P:):D
ပတ်၂စက်ကြီးကို ကောင်းတယ်ဗျာ......ပေးလိုက်ပီ မွမွ ဘွာတေး မှားလို. ၅ကြယ်လို. ဟိ
OMG!!!!!!! ကောင်းလှချည်လားဗျာ အားပေးသွားတယ်ခင်ဗျာ ရှယ်ပါပဲခင်ဗျာဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုသီချင်းမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ ဗျာ